Xitaa Kalluunka Dhimanaya Sabayntiisa | Martech Zone
Markii aan koray waxaan ku soo barbaaray rajo wanaagsan iyo rajo xumo, hooyaday waxay u badan tahay qofkii ugu farxadda badnaa uguna saaxiibtinimada badnaa ebid ee aad la kulanto. Waxay hubisay inaan ku soo barbaaray maskax ballaadhan, aniga oo aan qofna u rajeyneynin wanaag qof walbana ku dadaalaya sidii aan dadka uga caawin lahaa. Markii aan bilaabay inaan barto oo aan qaan gaadho ayaan waydiiyay sababta ay u caawiso dadka qaarkood oo runtii aysan jecleyn jawaabtooduna ay ahayd mid fudud.
Matt qof walba wuu fiicnaan karaa oo ka caawinta iyaga ayaa caawiya bulshada. Xusuusnow "hirarka kacaya waxay qaadayaan doonyaha oo dhan". Wax yar kamaan ogayn inay farriinteedu ahayd farriinta weyn ee aan ka soo qaadan doono barashada cilmiga dhaqaalaha hadhow markii aan dhiganayay kuleejka. Mar labaad waxaan bartay markay tahay dhaqaalaha, markay wax hagaagaan "hirar kacsan ayaa qaada doomaha oo dhan."
Sanadihii kobaca ee 90-meeyadii waxay runtii cadeeyeen Hooyaday iyo macallimiintayda econ labaduba waxay ahaayeen aqoonyahanno. In ka badan 15 sano (illaa 2008) kor u kac dhaqaale ayaa runtii kor u qaaday doonta qof walba. Intabadan ganacsiyada yar yar sanadahaas waxay ahaayeen kuwa aad ufiican, iibsadayaashu way badnaayeen, macaashku wuu fiicnaa xoogaa dadaal ahna way sahlaneyd in laga baxo oo la helo rajo diyaar ah oo karti u leh kobcinta dakhligaaga.
Sanadkii 2008, qeybtii kale ee fariinta waalidkey waxay bilaabeen inay macno yeeshaan. Aabbahay waa nin weyn laakiin wuxuu kaga duwan yahay hooyaday wuxuu aad ugu fiicnaa inuu maskaxdiisa ku hayo dhinaca hoose ee waxa dhab ahaan dhacaya. Farriinta uu ii soo diray wax yar bay ka duwanayd. Ayuu igu yidhi Xitaa kalluunka dhintay ayaa sabbeeya. Waxa uu ula jeeday waxay ahayd markii hirku kaco wax walba kor ayey u kacayaan laakiin wax walba maahan doon. Ujeeddadiisu runti way fududayd, dhaqaalaha xun ma abuuro daciifnimo, dhaqaale xumadu waxay muujisaa daciifnimo.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaan baranay inaan ku noolaado fariinta Aabahay. Iyo annaga oo ah, Waxaan ula jeedaa dhaqaalaha Mareykanka. Waxaan aragnay ganacsi aad u tiro badan oo qaatay go’aanno xun. Markay waqtiyadu fududaan jireen go'aamadaasi waxay umuuqdeen kuwa hagaagsan, ma jirin dhibaatooyin dhab ah ama cawaaqib xumo xulashooyinka xun. Laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee aan wadada ku garaacno wadadaas cawaaqibyadeeda ayaa la muujiyay oo badiyaaaba soo-gaadhista ayaa horseeday fashilaad masiibo ah
Anigoo ah tababaraha iibka, waxaan ku qaataa maalmahayga la shaqeynta milkiilayaasha meheradaha kuwaas oo arkaya dhinac cusub oo ganacsigooda ah. Dadka wax iibiya ee ay u maleynayeen inay fiicnaayeen ayaa u soo jeestay inaysan waxba qabanaynin marka laga reebo fuulitaanka mowjadaha dhowr macmiil oo muhiim ah oo korayay. Dadka wax iibiya ee diyaar u ahaa inay yareeyaan qiimo yar waqtiyada wanaagsan waa la dilayaa hada ma haystaan ​​wax ay dib ugulaabtaan aan ka aheyn qiimo dhimis.
Dadka wax iibiya ee aan sida joogtada ah u rajeyneynin waxay daawadeen mugooda iibkooda oo hadda burburay maadaama tartamayaasha ay ugaarsanayaan xisaabaadkooda. Laba sano ka hor daciifnimadan ayaa laga yaabaa inaanay muhiim ahayn, dhaqaaluhu wuu xooganaa, iibsadayaashu way badnaayeen oo xadadka ayaa caafimaad qabay. Dhaqaaluhu wuu sii kordhayay oo wuxuu lahaa nidaamyo iib ah oo daciif ah iyo kooxo iib ah oo qaldan ayaa dhibaatooyin ahaa, laakiin kaliya ma aysan aheyn dhibaatooyin waaweyn oo ku filan oo lagu saxo.
Maanta waa ka duwan tahay, meheraddaada ayaa lagu haystaa. Kooxdaada iibka ayaa gacanta ku haysa mustaqbalkaaga illaa aad ka ogaato inay ka shaqeynayaan istiraatiijiyad sax ah, qaab dhismeed sax ah oo ay leeyihiin xirfado sax ah xitaa soo kabashada waxay noqon doontaa caqabad.
Tags: suuq geynta Bluetooth
Astaan ​​Sare: West Baden
Hubinta Tixraacyada Suuqgeynta Internetkaaga
Nov 22, 2009 saacadu markay tahay 2:53 PM
Jeclahay odhaahda. Ma qaraabo dhow buu u yahay "Xitaa saacad jaban ayaa sax laba jeer maalintii?"